Ukulawula umhlaba: i-LGAF indlela - ii-Geofumadas
Agasti, 2013 cadastre, UkuCwangciswa kweziThili
Kubizwa ngokuba yi-LGAF, indlela eyaziwa ngayo ngeSpanish njengeSiseko soVavanyo loLawulo loMhlaba.
Esi sisisitye sokuthi ukuxilongwa kwemeko yomthetho yelizwe kwenziwa, ngokwemithetho kunye nezenzo ezinxulumene nomgaqo-nkqubo ngokubanzi kunye nokusetyenziswa komhlaba. Kukhuthazwa yiBhanki yehlabathi kunye ne-FAO, phakathi kwabanye; ngokuqhelekileyo kusetyenziswa kumazwe apho amaprojekti okuphuhlisa umhlaba aphakanyisiwe, ngokusekelwe kwintetho kaKlaus Deininger, uHarris Selod kunye noTony Burns IsiCwangciso soVavanyo loLawulo loMhlaba: Ukuchonga nokuLawulwa kweZenzo eziLungileyo kwiCandelo loMhlaba.
Amanyathelo endlela Ulawulo loMhlaba
Enye yezikhundla zolu msebenzi zivumela ukuba, ngokuhlalutya, iiphaneli kunye nezivumelwano zokulandelelana, ukubandakanya iingcali kunye neengcali ukuxilonga imimandla engundoqo:
IsiKhokelo soMthetho kunye neZiko
UkuCwangciswa koMhlaba, uLawulo loMhlaba kunye neRhafu
Ulawulo loMhlaba kaRhulumente
Ukubonelelwa koLuntu kwiNkcukacha zoMhlaba
Ingxabano kunye nokuLawula iMibango
Nganye kwezi abe neempawu inombolo, ubukhulu becala bakwicandelo nezalathisi 21 yolawulo komhlaba, abasasazeke 80 dimensions usisiseko esigcina ukuchonga inkqubela, imiqobo kunye nezenzo ezifunekayo yolawulo indawo kungaba kuba yinkxaso yokuphuhlisa. Ukongezelela, kukho iimodyuli ezimbini ezongezelelweyo ezisetyenziselwa iiprojekthi apho i-regularization inkqubo ifinyelele amanyathelo afanelekileyo ekwakheni isakhelo somthetho:
Ukufunyanwa kwiNqanaba elikhulu lamaLungelo eMhlabeni
Ixwebhu lingalayishwa kwiwebhusayithi yeBhanki yehlabathi, ngeelwimi ezahlukeneyo. Nangona kunjalo ndiyishiya kwi Scribd ngokuba yimaphi amaxwebhu ancedo aphelela kwikhonkco ephukileyo kunye nexesha. Lilonke, le ncwadana inika isikhokelo ngendlela ukuze kuququzelelwe kuze kuphunyezwe indlela yolawulo komhlaba, iinkcukacha iimfuno iingcali ukugaya, inika imiyalelo yoqokelelo lokuqala data, umbutho ka iiphaneli ingcali, kunye nokuphunyezwa zodliwano-ndlebe oluhleliweyo kwaye lubonelela ngefomathi ukulungiselela iziphumo.
Uninzi lwalo mdlalo lunokubonakala lubangqungquthela, kubachwephesha ababizwa ukuba bachonge indlela abazenza ngayo izinto, kutheni, kwaye ingaba ngcono njani; ngokukodwa kuba umbandela wezolawulo / urhulumente ngokuqhelekileyo uyingxaki ebuthakathaka kakhulu kwindawo apho uphando lwe-geomatics kunye nophuhliso lufikelele kumanqanaba amangalisa. Kodwa ekugqibeleni, isiselo esifanelekileyo ukuba sifuna ukuba iingongoma ezifakwe kwintsimi ziphephe kwimigaqo-nkqubo yoluntu evelisa ubutyebi kunye nokuphucula imeko yokuphila yabemi.
Ukulawula kwintsimi kwimigaqo-karhulumente
Ndixhoma uxwebhu apha, kuba ukuba luncedo kwayo kukukhathalela uluntu, ngelixa ndicebisa umbono wam wokufunda: "Kutheni izizwe zisilela". Isizathu sokuba ndicebise ukufundwa kwezi zixhobo zimbini, kukuba ii-geomatics azinikwanga kangako ukuba zifundele i-Economics, kwaye le yenye yezona zibalulekileyo, apho isifundo siya kubonakala siqhelekile. Incwadi (Kutheni iZizwe zisilela) nguDaron Acemoglu noJames Robinson, bekwindawo entle ngokubhekisele kwimizekelo, kwindlela umbono wento yezigqibo zomgaqo-nkqubo kawonke-wonke ongaba sisigqibo kwisizwe ukuba siphumelele okanye singaphumeleli.
Kungenokwenzeka ukuba ukufunda ngexesha lokuphumla kuya kuvuselela inambuzane enyulu, ukuba ingeyethu, yabalobi bale ngqungquthela. Kodwa ngaphaya kobuhle, mhlawumbi ukuba ukucinga kusenza sicinge ukuba kule ngxaki kukho into eninzi yokwenziwa, ngakumbi kwizinto ezilungileyo zabanye kunokuba kuqinisekiswe oko kuvezwe kwangaphambili.
Inzuzo encinane ibonwa ngabahlali, kunye nesihloko sepropati ezandleni zabo, ukuba i-Quaternary sector (urhulumente) ihamba phambili ngokuthe ngcembe kwindlela yokwenza umsebenzi wamagosa ayo.
Isifundo sokutshaya ucwangciso lomhlaba, unokuphelisa kwezinye iimephu ezidwetshwe kwiindonga zikamasipala, ukuba azihambisani nezicwangciso zophuhliso ezibonisa ngendlela elula indlela kunye nemithombo yakho yemiboniso yommandla inokufezekiswa ngayo.
Ukuxilongwa koMgangatho woLawulo loMhlaba (LGAF)
Okwangoku, ndiya kusebenza kwezinye iindawo zenkqubo ekufuneka iphuhliswe kweli candelo le-UTM Zone 15N. Ngoko ke ndiyathemba ukuthetha ngawo ngexesha elide, nokunyusa ngendlela efanelekileyo malunga nokuba ngubani onokubaluleka kubafundi abathanda ulwazi oludemokhrasi.
cadastre egeomates My
Post edlulileyo«Edlulileyo University ubuhlobo Cartographer yam
Post Next Geomatics iijenali - The nokubeka 40 engundoqoOkulandelayo "